China SPC Ft JD-063 rụpụta na Factory | N'akụkụ
A na-eji ala SPC eme ihe n'ọtụtụ ebe na azụmaahịa. Ọ bụ ụdị ala dabara adaba maka nrụzigharị nke ụlọ ochie na obodo. A na-eji ala mkpọchi mkpọchi PVC eme ihe n'ụlọ mma. Ọtụtụ n’ime ha agaghị ahọrọ ala SPC. N'ihi na ala SPC bụ nke efere plastik siri ike, ọ siri ike ma adabaghị maka oge mmepe ọkpụkpụ ụmụaka. Ndị agadi nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo ụkwụ ha. Oke siri ike n’ala ga - eme ka akwara sie ike. Ma ọ bụghị ya, mmadụ ole na ole na-eji ya, mana akwadoghị ya maka ịchọ mma ụlọ. Ọtụtụ ndị na-achọ ụlọ mma n’ụlọ na-aga Freescale wee jụọ ụlọ SPC. Mgbe ha mụtara banyere ụlọ LVT na-agbanwe ala na WPC flooring, ha na-eji obere ala SPC.
Xiaobian nụrụ na ọtụtụ ndị nọ n'ahịa na-asọpụrụ ala SPC, ma na-a drunkụkwa mmanya! SPC nwere njirimara pụrụ iche nke enweghị ike iji ya tụnyere osisi siri ike / ala / ụlọ PVC. Nke a bụ nchịkọta nke akụkụ ise kachasị nghọtahie nke SPC ala iji weghachite eziokwu!
1. Ngwa ntinye dị obere
SPC bụ ezigbo ihe onwunwe, yana uru nke nkwụsi ike, nkwụsi ike, na nchekwa gburugburu ebe obibi. A na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe ime ụlọ. Na-ekpuchi ọgwụ, egwuregwu, ụlọ akwụkwọ, agụmakwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, azụmahịa, ọfịs, wdg, ị ga-ahụ ọnụ ọgụgụ nke ala SPC.
2. Oge omumu
A na-eji PVC mkpọchi ala ma mee ka ọha mmadụ mara afọ iri na China. LVT mkpọchi ala (3.2mm na ọkpụrụkpụ) na WPC mkpọchi ala (5.5mm5.0mm na ọkpụrụkpụ) bụ ngwaahịa ndị na-abanye n'ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ dị na China site na mmalite oge. SPC ala bụ ngwaahịa ọhụrụ amụrụ n'ime afọ ise gara aga. Imirikiti LVT / WPC na-emepụta site na nrụgide mmanụ, na oge nnyefe dị ka ụbọchị 20. Mana ala SPC nwere ike ịgbanye n'otu usoro, oge nnyefe nwere ike belata ọtụtụ oge.
Nke gara aga: SPC Ft JD-062
Osote: WPC Ft M001